AirPort Nguva Capsule kubva kuLinux: aya ndo maitiro aungaiwana iyo | Linux Vakapindwa muropa
Makore mazhinji apfuura, apo ini ndaida kuwana internet pamba pese, kuva nedhiraivho rakaomarara rekuchengetedza zvese, uye ndikave neMac yangu nyowani, ndakafunga kutenga AirPort Nguva Capsule. Izvo zvaive zvisina kudhura, asi zvese zviri pamusoro zvakange zvakundikana ini, zvishandiso Yakandishandira zvakakwana kuti ndive nespeed yakanaka, yakaenda kure uye ini ndaishandisawo kunyora makopi angu muTime Machine. Makore gare gare ini ndakatanga kudzokera kuLinux, asi zvimwe zvinhu hazvisi nyore. Ini ndinowana sei iwo mafaera kubva kuLinux?
Zvichienderana nesisitimu yekushandisa, nzira yekuita izvi iri nyore kana kuti yakati rebei. Semuenzaniso, Ubuntu, iyo inowanikwa muvhenekeri zvisere zvepamutemo, ine shanduro apo zvese zvinoshanda nemirairo mishoma uye mimwe inoshanda zvakasiyana. Pano tava kuenda tsanangura maitiro ekugadzirisa mafaera yeAirPort Nguva Capsule kubva kuLinux, uye inoedzwa muUbuntu, Ubuntu-MATE, Kubuntu (haina kufanana neyaviri apfuura) uye Manjaro mune ayo KDE uye GNOME editions.
Updated: izvo zvinotsanangurwa pano zvakamira kushanda mushure mekuburitswa kweLinux 5.15. Kuti izvi zvishande, unofanira kushandisa kernel yakura, ine Linux 5.10 seyakanakisa sarudzo nekuti iLTS.
1 AirPort Nguva Capsule kubva kuLinux zvinoita sekunge tine Mac
2 Kufunga nezvazvo
AirPort Nguva Capsule kubva kuLinux zvinoita sekunge tine Mac
Muzviitiko zvese, iwe unofanirwa kunge uine iyo package yakaiswa cifs-zvishandiso. Kana tisina, tinoiisa.
Kana tangoisa, isu tichaisa iyo unit nemirairo iyi miviri:
Izvo zvichatibvunza isu mapassword maviri, rimwe re "sudo" uye rimwe racho richava reAirPort Nguva Capsule. Kamwe yakatarwa, mumasekondi ichaonekwa mune yedu maneja maneja.
Izvi zvinoshanda paKubuntu, Ubuntu-MATE uye Manjaro KDE uye GNOME. Kunyangwe ichifanira kutaurwa izvo kwete ese masisitimu anokwidza kutyaira mune imwecheteyo folda. Iwo wekuraira ndewe masystem senge Manjaro; Kubuntu uye Ubuntu MATE vanoshanda vasina "/ run". Iwo maX matatu haana kudaro; uko kunoenda iyo IP yeAirPort yako. Uye "Dhata" ndiyo inowanzo kuoneka. Kana isiri yako nyaya, chinja izvozvo futi. Uye, zvakanaka, Pablo ndini uye "airport" ndipo pandakasarudza kukwirisa unit. "Ntlm" ndiyo yekuchengetedza mhando uye "vers" ndiyo vhezheni yeSamba iwe yaunofanirwa kushandisa.
Kana izvo zviri pamusoro zvikasashandira iwe, sezvazvichange zviri nyaya yeUbuntu, semuenzaniso, isu tinofanirwa kutevedzera aya mamwe matanho:
Tinopinda mu / mnt / folda (cd / mnt).
Isu tinogadzira dhairekodhi kukwidza iyo AirPort Nguva Capsule. Iwo murairo ndi mkdir uye semuenzaniso wangu ndakagadzira airport (mkdir airport).
Kamwe iyo folda yagadzirwa, isu tinofanirwa kukwirisa iyo unit. Kwete izvozvo chete, asi iwe unofanirwa kumanikidza mamwe ma parameter. Iwo wekuraira ungave unotevera:
Ukasapinda kwechinguva, unogona kudzima kubva ku "gid" kusvika kumagumo woedza. Izvi zvinotibvumidza isu kuverenga, asi kwete kunyora. Pane imwe nguva tapinda kamwe chete, tinobvisa unit ne sudo umount / mnt / airport uye tinopindazve mutemo wakazara.
Kana uchibata nemirairo, zviri nyore kumisikidza kumusoro. Tinofanira kusimbirira kuti mumienzaniso iri pamusoro izita randakasarudzira dhairekitori, rine zita rangu rekushandisa nevamwe. Izvo zvinofanirwa kutaurwa zvakare kuti, semuenzaniso, Ubuntu haidi kuti isu tigadzire iyo folda kana yagadzirwa, asi muKubuntu inozvibvunza zvakare pese patinotangazve.
Zvakare, zvakakodzera kuti ugadzire inoitisa zvinyorwa faira nemirairo uye nekuiendesa kune iro folda / bin, kuitira kuti gare gare tinogona kunyora pfupi kuraira mune terminal uye zvese zvichave nyore. Chii chiri kuseri kwe "-o" pane zvingasarudzwa uye ipapo unogona kuwedzera password ye router kuseri kwekoma, isina nzvimbo uye nechitambo "password = PASSWORD", uko "PASSWORD" iri password yeAirPort Nguva Capsule. Izvo hazvikurudzirwe kusiya kiyi mune zvinyorwa faira iyo "chero munhu" anogona kuona, asi iri sarudzo.
Ndinovimba iyi dzidziso yakubatsira iwe. Ndichiri kurangarira pandakakwanisa kupinda kubva kuLinux, uye ndinovimba ndakaita kuti vamwe vekare-maquero vafare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuwana yako AirPort Nguva Capsule ruzivo kubva kuLinux
Mr mac akadaro
kukwira kukanganisa (1): Kushanda hakubvumidzwe
Tarisa kune mount.cifs (8) bhuku remanyore (semuenzaniso man mount.cifs) uye kernel log mameseji (dmesg)
midzi @ macfiles: ~ # dmesg
dmesg: verenga kernel buffer yakundikana: Kushanda hakubvumidzwe
Pindura Mr. Mac
Iyo nyowani vhezheni yeisingaputsike Enterprise Kernel R6U2 yaburitswa